Wim Coekaerts ajoina Microsoft ikozvino | Linux Vakapindwa muropa
Wim Coekaerts ajoina Microsoft izvozvi
Isu tatoona zvimwe uropi hunobuda enda kumakambani akaita seApple kana Microsoft. Asi vanhu vanoshanda pane yakavhurika sosi vane tarenda kwazvo uye makambani anoda vanhu vakadaro, zvinopera pasina kutaura. Tine muenzaniso muMiguel de Icaza, muvambi weGNOME, uyo aiti anoshandisa Mac OS X uye uyo pakupedzisira anoita kunge aida kusvika kuMicrosoft, achinzi naRichard Stallman semutengesi ...
Kubva kuLxA hatishoropodzi kufamba uku, isu tinongozivisa, nekuti mumwe nemumwe akasununguka kuita zvaanoda noupenyu hwake. Asi ino nguva isu tine imwe yeiyi nhau inobata mune ino kesi Wim Coekaerts, yakasainwa neMicrosoft, pamwe nekuda kwenzira iyoyo yekambani yeWindows kuswedera kuvhura software sosi uye nekufamba kwazvino maererano neLinux yavakagadzira kubva pakauya CEO mutsva wekambani windows.
Kune avo vasingazive, Wim Coekaerts ndiye, kana zvirinani aive, musoro weiyo Oracle Linux chirongwa uye zvakare zvine chekuita neiyo virtualization engineering yekambani, nekuti izvozvi ichave iri chikamu cheMicrosoft. Iyo Mr Linux, sezvavanodaidza Wim, pakati pezvimwe zvinobudirira munharaunda, anozivikanwa nekushandura huzivi hweOracle, achivaita kuti vabve pakuronga chete kweWindows kuti vavhurewo Linux, vaine VirtualBox yeLinux uye vachizvigadzirira yavo Oracle Linux distro zvichibva RHEL.
Iye zvino akabatana neRedmond semubatanidzwa mutevedzeri wemutungamiri weakavhurika-sosi ku Enterprise Cloud boka. Tichaona chero shanduko senge yaakasimudzira muOracle asi ino nguva mukati meMicrosoft? Zvingave zvinonakidza kuona kana ichisundira kubva mukati kuti Microsoft ifambe zvishoma padhuze neLinux. Kunyangwe mamwe midhiya ane runyerekupe pamwe nekugona kugadzirwa kweMicrosoft Linux kugovera kwegore uye ndosaka kusaina kwayo ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Linux vs. Windows » Wim Coekaerts ajoina Microsoft izvozvi
Zviri pachena kuti isu tese tine mutengo, uye zvinangwa uye mazano pakupedzisira anotengeswa nemari, yakapusa.
Ini ndinogona kufunga zvirevo zviviri kutsanangura kufamba kwazvino kwaMicrosoft: kana iwe usingakwanise kurova muvengi, batana naye (zvinosekesa kana avo vari muhwindo vaine zvinopfuura makumi mapfumbamwe muzana% yedhairekitori, asi ngatirege kukanganwa kuti mubhizimusi rine mari maseva uye izvo zvese zvinhu iLinux iyo inogadzirwa ne90% yemusika), uye chechipiri chirevo: govana uye ukunde. Ini ndinofunga ndizvo zviri kuitika nguva pfupi yadarika neMicrosoft uye yakanyanya kuvezwa "nzira" yekuvhura software. Kubiridzira kwese. Kwazisai vese.
Kune Microsotf chirevo chingashanduka: Kana iwe usingakwanise nemuvengi, chitenge.
Zvakanaka, ndine chimwe chirevo: Muvengi anotiza zambuko zvesirivheri. Java uye OpenOffice ichaponesa manzwiro mukutambudzika kwayo. Ameni.
Pindura kuna D.
Ini ndinogadzirisa. Kunyarara kwepamoyo, ini ndaida kutaura. Zviri kuti nhau dzakadai dzinondinakidza, damn it. XD
Miguel de Icaza, muvambi weGNOME, uyo aiti anoshandisa Mac OS X uye uyo pakupedzisira anoita kunge aida kusvika kuMicrosoft, achinzi naRichard Stallman semutengesi ...
Kubva kuLxA hatishoropodzi kufamba uku, isu tinongozivisa, nekuti mumwe nemumwe akasununguka kuita zvaanoda noupenyu hwake.
OK saka munhu wese anogona kuita chero chaanoda TRUEDDDD ???
Tichaona chero shanduko senge yaakasimudzira muOracle asi ino nguva mukati meMicrosoft? Zvingave zvinonakidza kuona kana ichisundira kubva mukati kuti Microsoft ifambe zvishoma padhuze neLinux. Kunyangwe mamwe midhiya ane runyerekupe pamwe nekugona kugadzirwa kweMicrosoft Linux kugovera kwegore uye ndosaka kusaina kwayo ...
ipapo vanhu vanogona kuita zvavanoda chero bedzi iyo linux uzivi inosimbisa
Kana iwe uchikwanisa kuita zvaunoda vanababa saka anogona kuisa huzivi hwekambani inoshanda asi hazvo zvakadaro ...
nharaunda inogara ichipesana kwazvo ye linux haidi kuti ndiite zvavanoda ivo vanoda kuti nyika ifunge senge hausi kuzosvika chero kupi senge iyi taliban linux
Vazhinji vanoti windows zvinotyisa asi vanogara vachida neFERVOR kuti ive yemahara kodhi, pane zviuru zvezvinyorwa zvinomiririra izvozvo
ZVINO ZVATINOGARA MUZVAKAIPA ZVAKANAKA HERE? naaa akaipa nekuti haafunge seni asi kana azviita ndiye achave shasha munyika .. ndapota….
RaspEX Linux: distro yeiyo Raspberry Pi 3